Bioinformatics Nyanzvi Job Duty Template – JobDescriptionSample
musha / Job Description / Bioinformatics Nyanzvi Job Duty Template
Bioinformatics Nyanzvi Job Duty Template
superadmin Chikumi 18, 2016 Job Description Leave mhinduro 254 Views
Detail Agriculture Nyanzvi Work Description Template
Chikumi 18, 2016
Assessors Job Mharidzo
Community Health Workers Work Description Template
Muperekedzei kuongorora kushandisa bioinformatics nzira uye pfungwa munzvimbo somuenzaniso zvinodhaka, zvokurapa ruzivo computational zvipenyu, proteomics bhayoroji . Zvinogona marongerwo Wana zvokuimba yokuongorora uye processing genomic ruzivo, kana mamwe mashoko Organic uye zvinyorwa.
Ramba sezvaaienderana zvishandiso, tawanda biochemistries, kana Software kupinda magungano dziri nyanzvi uye kuongorora dzokurapwa zvinhu.
Bayirai zvinyorwa uye computational zvinoridzwa kutsvaka pakugadzira anotsanangura akadai somuenzaniso nhaka ongororo, kureva kuti Gene-okuti, naGene basa kutsunga.
Kutungamirira basa mashoko michina vashandi pakutevedzera uye nyanzvi bioinformatics zvinangwa kana zvekushandisa munzvimbo dzakadai somuenzaniso bioinformatics kuti dzokurapwa, transcriptomics, metabolomics, uye proteomics.
Kubereka manyoro ekombiyuta kana gadzirisa Software chipo kugutsa akananga zvekuchipatara basa zvinodiwa.
Gadzira date mazano uye zvinyorwa.
Tanga kana oshandura dandemutande inobva bioinformatics nzira.
Style uye kushandisa bioinformatics algorithms kusanganisira asina anorayira uye kuongororwa muchina pakudzidza, noutano budiriro, kana graphical algorithms.
Tanga yakanaka computational nzira uye hurongwa nzira sezvo-zvinodiwa tsvakurudzo huru.
Batanidza Info kushandiswa nezviito somuenzaniso bioinformatics ndechokuti STRUCTURAL naGene okuti vafambi.
Kurukura tsvakurudzo kubatsirwa kuburikidza zvokurapa mabhuku, mharidzo gungano, kana basa Mishumo.
Kuumba nevakawanda kuwanika, Bhizimisi proteomic -genomic zvinounzwa.
Check pamwe vanoongorora kutsvakurudza nyaya, zvamaronga ruzivo zvakatinakira mhinduro, kana kumisa nzira kuti vari computational.
Ongorora datasets guru akadai somuenzaniso genomic dzakatevedzana mashoko dzinongoitika mashoko, uye date date chokuita kurapwa kana chikuru tsvakurudzo mabasa.
Recommend akavhiyiwa kuti vavandudze.
Tsvaka mazano kubva muzvikamu zvakadai somuenzaniso kukurudzira, bhizimisi budiriro, uye akavhiyiwa kuti synchronize chigadzirwa budiriro kana mberi.
Batsira kushandisa Software programmers ari kuchinja uye kufambira mberi bioinformatics Software ndechokuti basa.
Ongororo bioinformatics pfuma uye chikumbiro chitsva uye.
Ita pfupiso inofananidza chokwadi nezvevanhu genomes.
Taurira vamwe mukati musanganiswa uye kushandisa maturusi vari bioinformatics.
Wedzerai nomumwe interfaces kuti bioinformatics Software uye zvinyorwa.
Job Zvinhu Vanoda
Kuverenga Kunzwisisa-kunzwisisa mitsetse uye takagadzirira ndima basa chokuita magwaro.
Active-Kuteerera-achivapa ruzivo yose chii nevamwe dziri vachiti, achitora nguva yokuti vanzwisise zvinhu zvaakasikwa, kubvunza mibvunzo sezvo akakodzera, uye kwete stifling pane zviitiko zviri kukodzera.
Kubudisa-Kutaura zvinobudirira hwokunyora kwete sokuita kuti zvinodiwa vateereri.
Kutaura-Kutaura vamwe mashoko effortlessly.
Masvomhu-Kushandisa pamasvomhu yokugadziridza matambudziko.
Research-Kushandisa mhinduro uye mitemo nesayenzi kuti kugadzira nyaya.
Critical-Thinking-Kushandisa chikonzero uye kufunga kuti ayeuke zvinokwaniswa nekuipira pedyo, mhedziso kana nzira dzokupedza matambudziko.
Active-Learning-Kuziva migumisiro mashoko yakachena vose raivapo uye ramangwana matambudziko zvokuita uye.
Kudzidza Pedyo-tichinhonga nokushandisa dzidziso / nzira dzidzo uye nzira zvakarurama dambudziko apo kudzidza kana coaching zvinhu zvitsva.
Vachiongorora-TrackingPEREvaluating kunyatsoshanda pachako, vanhu zvakasiyana, kana makambani tora remedial chiito kana kuti vaunze nani.
Social Perceptiveness-Kuziva othersA mhinduro nokunzwisisa nei vanopindura apo vanoita.
Kufambisa rinochinja zviito pamwe maererano nevamwe’ zviyero.
Kunyengetedza-kunobudirira vamwe kuchinja miitiro kana zvavo uropi.
Nhaurirano-Kuunza vamwe anorenda uye vachitsvaka ayananise variances.
Kubatsira-Kudzidzisa vamwe chete sei kuti danho.
Company zvevhiki-Anonyatsoratidza achitsvaka nzira yokubatsira vanhu.
Advanced zvinetso-kusiyanisa matambudziko akaoma uye kuongorora mashoko ane chokuita dzika zvavanogona uye kukudziridza uye kuongorora pazviridzwa.
Mabhizimisi Yekuongorora-Kuongorora zvinoda uye kushambadzira anofanira kuita chakagadzirwa.
Engineering Design-Kujairana maturusi kana urwu uye zvigadzirwa kushanda munhu kunoda.
Gear Selection-Kusarudza mhando midziyo uye zvokushandisa zvinodiwa kuti aite basa.
zvirongwa yakavamba-Kuwedzera, zvinogadzirwa, waya, kana namano kugutsa nokurondedzerwa.
Coding-kunyora kombiyuta zvikumbiro mafomu zvakasiyana.
Operations Monitoring-Kuona mamwe anonongedzera, zvokuchunisa, kana zviratidzo kuti chokwadi pane mudziyo parizvino kushanda nemazvo.
Procedure and Control-Kutadzisa mashandiro anoita midziyo kana unyanzvi.
Equipment Maintenance-Kuita yokuchengeta kuti purogiramu musi midziyo uye kusarudza apo.
Troubleshooting-Kuona zvinhu shure glitches kuti vari kuronga uye kusarudza kuti zvinhu zvofambiswa sei nezvazvo.
Repairing-Vachigadzira mienzaniso kana unyanzvi uchishandisa zvinokosha nzira.
Quality Kuzvidzora Research-Kuita inspections uye mazano nhumbi, mabasa, kana nzira kutonga kubudirira kana unhu.
Uchenjeri uye zvisarudzo-Kufunga rwevanhu mari uye zvakanakira zvinogona maitiro kuwana munhu zvakakodzera.
Analysis-Kuona kuti chirongwa worudzii vanofanira kushanda uye akarurama sei kuvandudzwa zvakatipoteredza, mabasa, uyewo ezvinhu anogona tinzwe kubatsira.
Nzira Yekuongorora Kuziva matanho kana zviratidzo maitiro uyewo pamatanho aiva vanofanira kuvandudza kana zvakarurama chaitwa, hama kuti zvinangwa zvenyika mudziyo.
Time-Management-Kudzora nguva vamwe uye kwomunhu pachake nguva.
Pokudzora mari-Kuona sei mari achakurumidza kupedzerwa kuwana basa nokuzadzikiswa, uye nekurangarira kuti havashandisi mari idzi.
Management pamusoro Material Sources-Kuitirwa uye pakuwana akakodzera Utilisation zvomuviri, Ezvemutauro, uye zvokushandisa zvinodiwa kuita zvikuru basa.
Pokudzora Workers Resources-Building, zvinokurudzira, uye aitungamirira vanhu nokuti kuita, Pakusarudza zvakanakisisa vanhu venyu basa.
Training Kukosha Experience Kukosha
Bachelor raMwari Degree
pamusoro 2 makore, kumusoro-uye kusanganisira MAKORE
Career Control Unyanzvi Kukosha
rutsungiriro – 90.20%
danho rekutanga – 92.21%
simba – 84.76%
ruyamuro – %
Basa panyaya Vamwe – 78.96%
Pressure Houkago – 84.11%
kuvimbisika – 92.37%
Nezvemabasa Details – 91.72%
simba – 89.80%
rusununguko – 89.00%
budiriro – 92.97%
Analytical Thinking – 97.00%
pashure Green Entrepreneurs Job Description Mharidzo
Next Graders And Sorters, Agricultural Products Job Description / Mabasa And Duty Mharidzo
Fischer Operation Vanamakanika Description Template
Basa mano basa nokuda zvinoyerera, dzora, or using nuclear energy to aid scientists in …